भोटेकोशी गाउँपालिकाद्वारा महिला पत्रकारिता तालिम सुरु | Sindhu Jwala
२४ माघ, तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) । भोटेकोशी गाउँपालिकाले युवा महिलाहरुलाई लक्षित गरि ७ दिने पत्रकारिता तालिम सुरुवात गरेको छ । ’सक्षम पत्रकार उत्पादन तथा पत्रकारितामा फरक धारको अभ्यास‘ स्लोगन सहित महिलाहरुको क्षमता अविवृद्वि गर्ने उद्देश्यले हिजोबाट तातोपानीमा तालिमको सुरुवात गरिएको हो ।
५० जना महिला सहभागिता तालिमको उद्घाटन् भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उापध्यक्ष दावुटी शेर्पाले गरेकी हुन् । तालिम उद्घाटन पछिको मन्तव्य राख्दै उपाध्यक्ष शेर्पाले पछाडी परेका महिलाहरुलाई फरक क्षमताको विकास गराउने हिसाबले सो किसिमको तालिमको आयोजना गरिएको बताईन । ’महिलाहरुमा पनि पत्रकारिताको माध्यमबाट क्षमताको विकास गर्नपर्छ भनेर यो तालिमको सुरुवात गरेका हौं‘, उपाध्यक्ष शेर्पाले भनिन् । गाउँपालिकाद्वारा महिलाहरुको क्षमता अविवृद्वि तथा सशक्तिकरण गर्ने शिर्षकबाट छुट्याईएको बजेटबाट तालिमको आयोजना गरिएको उनले बताईन । उनका अनुसार पत्रकारिता तालिमको लागि बजेट ३ लाख रहेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद निरौलाले पालिकाको योजना विकास योजनामा लगानी गरिए जस्तै फरक प्रतिभा र फरक क्षमताको विकास गर्न समेत लगानी गरिएको बताए ।
तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक पाटन क्याम्पसका प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले विज्ञान र प्रविधिको विकास संगै व्यक्तिका क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्ने धारणा राखे । ७ दिने प्रशिक्षणबाट महिलाहरुले प्राप्त गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमतालाई गाउँपालिकाले पूँजिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे ।
तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा स्थानीय होटल व्यवसायीले समेत सहयोग रहेको छ । जम्मा पाँच वडा रहेको भोटेकोशीमा पत्रकारिता तालिममा सबै वडा बाट सहभागिता रहेका थिए । कार्यक्रम तातोपानीको सोनाम लजमा गरिको हो ।
This entry was posted in स्थानीय तह, समाचार, भोटेकोशी गाउँपालिका. Bookmark the permalink.
पहिराेमा पुरिएका ३३ को शव फेला, ६ अझै वेपत्ता
क्यान्सर पीडित गुणकेशरीको उपचारको लागि रकम जुट्दै, शिक्षकहरुद्वारा सहयोग अभियान
सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षमा बस्नेत निर्विरोध, अन्य पदाधिकारीमा मतदान हुनसक्ने
भन्सार जस्तो संवेदनसिल क्षेत्रमा दिउसै चोरी, गाडी भेटियो तर चोर भेटिएन